मोहनी अवतार - विकिपिडिया
राजा रवि वर्माले बनाएको चित्र (मोहनी पिङ खेल्दै)
भगवान विष्णुले देवता र दानवहरूले समुद्र मन्थन गरेर निक्लेको अमृत देवताहरूलाई मात्र बाँट्नको निमित्त स्त्री मोहनी रुप धारण गरेका थिए यो अवतारमा विष्णुले देवताहरूलाई अमृत र दानवहरूलाई मदिरा दिएर देवताहरूको कल्याण गरेका थिए। पछि गएर भगवान शिवलाई मोहनी रूपको दर्शन गराएका थिए।
१ समुद्र मथनमा मोहनी अवतार
२ कैलाशमा मोहनी रुप
समुद्र मथनमा मोहनी अवतार[सम्पादन गर्ने]
एक पटक देवता र दैत्यहरू मिलेर समुन्द्र मन्थन गरेर अमृत उत्पन्न गरेका थिए । समुद्र मथन गर्दा समुद्रबाट धन्वन्तरी समुद्रबाट अमृतको घडा बोकेर निस्किएका थिए । त्यो अमृतको घडा सबै भन्दा पहिले दैत्यहरूले धन्वन्तरीको हातबाट खोसेर लिए । दैत्यहरूले देवताहरूलाई अमृत न दिएर अमृतमा आफ्नै कब्जा जमाउन खोजे । अमृत कलशमा दैत्यहरूले कब्जा जमाएको देखेर भगवान विष्णुले एक सुन्दर नारीको रूप लिएर उपस्थित भए। दैत्यहरू मोहनी रूपलाई देखेर मोहित भए। दैत्यहरूले मोहनीसँग अमृत दैत्यहरूको समुहमा बाँटी दिने आग्रह गरे। मोहनीले देवता र दानव दुवै समूहको परिश्रमबाट प्राप्त भएको अमृत कसरी दैत्य समुहमा मात्र बाँटी दिउँ भनेर प्रश्न गर्दा मोहित भएका दैत्यहरूले दुवै समुहमा बाँट्ने सहमती दिए। त्यस पछि मोहनीले एक तर्फ दैत्य समुह र अर्को तर्फ देवता समुहलाई बसालेर आफ्नो लिलाले अमृतको घडा सँगै मदिराको घडा जोडेर देवताहरूलाई अमृत र दैत्यहरूलाई मदिरा दिन थाले त्यसै बेला चन्द्रमा र सूर्यदेवको बिचमा राहु नामको राक्षस बसेको थियो राहुले चन्द्रमालाई दिन लागिएको अमृत थापेर खायो यो देखेर मोहनी रूप छोडेर भगवान विष्णुले तरवारले राहुको टाउको काटे तर अमृत खाई सकेको राहु मरेन त्यसलाई भगवान विष्णुले टाउको तर्फको भाग राहु ग्रह र खुट्टा तर्फको भाग केतु ग्रह बनाई देवता समुहमा राखे।
कैलाशमा मोहनी रुप[सम्पादन गर्ने]
समुन्द्र मन्थनको समयमा देवता र दैत्यहरूलाई भगवान विष्णुले मोहनी रुप धारण गरेर मोह बनाएको कुरा महेश्वरले सुने । यो कुरा सुनेर भगवान शिवको मनमा विष्णुको मोहनी रुप हेर्ने विचार आयो । भगवान शिव कैलाश पर्वतबाट ओर्लिहेर वैकुण्ठ गए । कुनै पूर्व सूचना विना आफ्नो धाम बैकुण्ठमा देवादीका महादेव भगवान शिवलालाई देखेर विष्णु आफ्नो गद्दीबाट उठेर शिवजीको आदर सम्मान गरे । आदर सम्मान पछि विष्णुले भगवान शिवलाई यसरी बैकुण्ठ आउनको कारण सोधे । विष्णुको कुरा सुनेर शिवले भगवान बिष्णुको मोहनी रुप हेर्ने विचारले आएको कुरा बताए । शिवको यो कुरा सुनेर भगवान विष्णुले देवादीका महादेव, महात्मा जस्ता भगवानले मोहनी रुप हेर्नु हुन्न भने । विष्णुको यो कुरा सुनेर शिवले घमण्ड गर्दै आफू ति मुर्ख देवता र दानव जस्तो मोहनी रुप हेर्दैमा मोहीत हुने मुर्ख नभएको र आफ्ना सबै इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेको जितेन्द्रिय भएको कुरा भने । आफुसँग संसारका सबै सुन्दरीहरूले पूजा गर्ने गरिएकी पार्वती जस्ती सुन्दर पत्नी भए पनि आफू कहिल्यै स्त्री मोहमा नपरेको कुरा भने  । विष्णुलाई कसैले घमण्ड गरेको मन पर्दैन । शिवले घमण्ड गरेर आफ्नो वर्णन आफै गरेको सुनेर विष्णुको मनमा शिवको घमण्ड चकनाचुर गर्ने इच्छा जाग्यो । विष्णुले शिवलाई पछि कुनै दिन कैलाशमा नै आएर मोहनी रुप देखाउने वाचा गरेर शिवलाई फर्काए । आफुलाई मोहनी रुप नदेखाएकोले शिवजी दुःखी भएर कैलाश फर्किए । विष्णुले कैलाशमा आफ्नो माया फिजाएर वसन्त ऋतुको आगमन गराए । वसन्त ऋतुको आगमनले कैलासको वातावरण निकै मन मोहक भयो । चारै तिर हरियाली फैलियो । चारै तिर नयाँ नयाँ फूलहरूको सुगन्ध फैलियो । यसै गरी नयाँ नयाँ चराहरूको आवाजले कैलाश गुञ्जायमान हुन थाल्यो । कैलाशको यस्तो शोभा देखेर भगवान शिव पार्वतीको साथमा प्राकृतिक सौन्दयर्ताको आनन्द लिन थाले ।  एक दिन बिहान भगवान शिव पार्वतीको साथमा प्रेमालाप गरिरहेको समयमा उनले आफ्नो दरवार भन्दा केही पर मोहनीलाई देखे । मोहनी कहिल्यै हातमा भकुण्डो लिएर एक्लै खेलिरहेकी छिन् भने कहिल्यै पिङमा बसेर मच्चाइ रहेकक छिन् । यस्तो सुनसान कैलाशमा अकस्मात परिवर्तन भएको प्राकृतिक सौन्दर्यताले मोहित भएका शिवले मोहनीको रुप देखेर निकै मोहित भए । शिव पार्वतीलाई केही पनि नभनेर सुटुक्क उठेर मोहनी भएको ठाउँमा गएर मोहनीको लिला हेर्न थाले । शिव मोहनीको रूपमा निकै मोहित भएर मोहनीको रूपलाई एकोहोरो हेरेर बसे । अकस्मात आफुलाई केही नभनी उठेर गएकाले पार्वती पनि शिवका पछि पछि लागेर गइन् । आफू भन्दा कैयौँ गुणा बढी सुन्दर मोहनी रुप देखेर पार्वती पनि मोहित भएर त्यो लिला हेर्न थालिन् । मोहनी शिवजी आफ्नो सामु आएको केही थाह नपाए जस्तो गर्दै भकुण्डो खेलिरहेकी थिइन् । यसरी खेल्ने क्रममा भकुण्डो उफ्रेर शिवजी भएको ठाउँमा गयो र शिवले भकुण्डो हातले समाते । भकुण्डो शिवले समातेको देखेर मोहनी लजाय झैं गर्न थालिन् । यसरी मोहनी लजाएको देखेर शिवले मोहनीलाई आफ्नो परिचय दिंदै लजाउनु पर्दैन तिमी को होउ भनेर सोधे । शिवको कुरा सुनेर मोहनीले लजाउँदै आफ्नो भकुण्डो माग्ने नाटक गरिन् । मोहनीको रुप देखेर आफ्नो सबै नियम बिर्सेका शिवले मोहनीलाई नानाथरी भनेर फकाउन थाले । शिव आफ्नो रूपमा मोहित भएको देखेर मोहनी वृद्ध भएर मसँग कुरा गर्न लाज लाग्दैन ? आफू जस्तै योगिनी खोज मेरो पछि नलाग जस्ता अनेक्यौं शब्दले शिवको निन्दा गर्न थालिन् । यो सबै कुरालाई पार्वती पनि लुकी लुकी हेरिरहेकी थिइन् । मोहनीको रूपमा मोहित भएका शिव मोहनीले आफ्नो जति अपमान गरेपनि सहेर फकाउन थाले । यसरी फकाउँदा फकाउँदै शिवले मोहनीलाई समातेर आफ्नो काखमा बसाउन खोजे । यो देखे पार्वतीले शिवलाई यो के गरेको देवताहरूका पनि देवता महादेव जस्ता व्याक्तिले यसरी स्त्री मोहमा परेर किन परस्त्रीलाई छोएको ? भनेर प्रश्न गरिन् । पार्वतीलाई देखेर मोहनी लजाय झैं गरेर शिवको अङ्गालोबाट फुत्केर दौडिन् । यसरी मोहनी फुत्केर दौडेको देखेर शिव पनि मोहनी कै पछि दौडन थाले । मोहनीको पछि शिवलाई दौडेको देखेर पार्वती पनि पछाडी दौडन थालिन् । यसरी दौडने कर्ममा मोहनी कहिलै शिवको नजिक पर्थिन् भने कहिले उम्केर भाग्थिन् । यसै क्रममा मोहनीको सारीको छेउ शिवको हातमा आयो र शिवले सारी तान्दा सारी फुस्केर मोहनी सर्वाङ्ग नाङ्गी भइन् । अगाडि मोहनी बीचमा शिव र पछाडी पार्वती भएर पुरा संसार घुम्न थाले । मोहनीको नाङ्गो शरिर देखेर ठाउँ ठाउँमा शिवजीको विर्य पतन भएको थियो । यिनै शिव विर्य पतन भएका ठाउँमा पछि आएर विभिन्न धातुहरूका खानि बने  यसरी चौध भुवन डुलेर थाकेपछि अन्तमा विष्णुले शिव र पार्वतीलाई आफ्नो मोहनी रुप छोडेकाले शिव र पार्वती लजाउँदै कैलाश फर्केका थिए । यसका साथै आफैले दिएको बरदानले भस्मासुर नामको दैत्यले मार्न खोज्दा भगवान शिव आफ्नो बचाउको लागि मद्दत माग्न भगवान विष्णु कहाँ गएका थिए । त्यो बेला पनि भगवान बिष्णुले मोहनी रुप धारण गरेर भष्मासुरलाई मोहित बनाई मारेर भगवान शिवको प्राण रक्षा गरेका थिए । पछि गएर भगवान शिवले मोहनीसँग विवाह गरेर सन्तान सम्म जन्माएका थिए भन्ने पनि कथा रहेको छ ।
↑ १.० १.१ १.२ १.३ १.४ हिन्दू धार्मिक पुस्तक सुकसागर, प्रकाशक सुब्बा होमनाथ केदारनाथ वाराणसी, भाषा नेपाली प्रकाशन मिती सन् 1955
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=मोहनी_अवतार&oldid=1023440" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १५:३७, २७ जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।